အသုံးပြုသူကို manual | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
အသုံးပြုသူကို manual, how to use OS-STORE, how to buy, how to sell, how use coupon code, စသည်တို့ကို…..
ဒီဇင်ဘာလ 17, 2013 admin ရဲ့ 0
ဒီဇင်ဘာလ 16, 2013 admin ရဲ့ 0
ဒီဇင်ဘာလ 15, 2013 admin ရဲ့ 0
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2013 admin ရဲ့ 0
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2013 admin ရဲ့ 0
Click ‘login in’, and fill in the information to submit, you will be our member. OS ကို-STORE အားဖြင့်.
Samsung က ပရိုဆက်ဆာ processor ​​ကို OS ကို-STORE နည်းပညာ device ကိုမော်ဒယ် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Software များ 64-နည်းနည်းက Windows ဥပဒေရေးရာအနက် HTC က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Intel က HD Graphics Technology_Internet မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စီပီယူ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု
OS ကို-STORE ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီပီယူ Software များ Nokia က 64-နည်းနည်းက Windows စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ နည်းပညာ စမတ်ဖုန်းများ Samsung ရဲ့ Galaxy Sony Ericsson က Samsung က Qualcomm မှ Intel က Server ကို စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က processor ​​ကို HD Graphics HTC က ပရိုဆက်ဆာ device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet